Umtsalane wedolophu endala kwisakhiwo esahlukileyo seyadi - I-Airbnb
Umtsalane wedolophu endala kwisakhiwo esahlukileyo seyadi
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguEeva
Wamkelekile eLoviisa ngaselwandle. Indlu yethu isembindini wedolophu, kwidolophu enembali. Isikwere semarike, i-Marina yeendwendwe, iivenkile kunye neeresityu zikumgama wokuhamba. Ulwandle luhamba nge-10-15 min.
Indawo yokuhlala (ibhedi ephindwe kabini i-160 cm ububanzi) ikwisakhiwo esahlukileyo sentendelezo, kunye nomnyango wangasese. Igumbi lineyalo yangasese ephangaleleyo eyahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela elineeshawa ezimbini.
Ecaleni kwesitrato (mahala)
Igumbi leendwendwe elisanda kulungiswa elinendlu yangasese kunye neshawari kumnyango owahlukileyo. Kumgama wokuhamba kuzo zonke iinkonzo zasedolophini, imarike, i-marina yeendwendwe kunye neekhefi zasehlotyeni ezithandekayo. Eli gumbi likwanayo nencwadana encinci yencwadana emalunga neendawo ezibonwa nguLoviisa kunye neendawo ezifanele ukutyelelwa. Indawo esembindini kakhulu.
4.89 · Izimvo eziyi-81
Umbuki zindwendwe ngu- Eeva
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lovisa